Ciidamada Uganda oo dilay Wadaad Muslim ah iyo Dad badan oo loo xiray Qaraxyadii Kampala. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Booliska dalka Uganda oo ku jira howlgalka baaritaanka qaraxyadii ka dhacay magaalada Kampala ayaa toogtay shan qof oo la tuhunsan yahay oo uu ku jiro wadaad muslim ah.
Booliska ayaa sidoo kale xiray 21 qof, taasoo qeyb ka ah baaritaanka lagu hayo labada qarax oo ismiidaamin ahaa, ayna sheegatay kooxda Daacish, kuwaasoo Talaadadii lagu dilay afar qof.
Qaraxyada ayaa haaa kuwii ugu dambeeyay weeraro xiriir ah oo ka dhacay dalka ku yaal Bariga Afrika ee Uganda, waxaana markaas kadib aad loo adkeeyay ammaanka, waxaan bilowday baaritaan xoog leh oo lagu sameeynayo qaraxyada.
Madaxweyne Museveni ayaa wacad ku maray inuu ka adkaan doono “argagixisada”. Weerarada ka dhacay caasimadda Kampala ayaa isu jiray daqiiqado kooban gudahood, iyadoo laba qof oo is-qarxiyay ay mootooyin wateen, iskun qarxiyeen meel u dhow xarunta baarlamaanka, halka weerarka saddexaad uu beegsaday bar koontarool oo ku dhow saldhigga dhexe ee booliska.
Booliisku waxay sheegeen in weerarradaas ay ka dambeeyeen “argagixiso gudaha ah” oo lala xiriirinayo ururka Allied Democratic Forces (ADF), oo ah koox hubaysan oo ka hawl-gasha bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ooxiriir la leeyahay ISIS (Daacish).
Galbeedka Uganda dalka ayaa lagu dilay “afar qof oo looga shakisan yahay argagixiso, kuwaas oo dib ugu laabanayey dalka DRC. Ninka shanaad Shekikh Abbaas Muhumed ayaa lagu dilay magaalada Nsangi, oo ka tirsan degmada Wakiso, isagoo isku dayayay inuu ka baxsado isku day lagu xiri lahaa.
Sheekh Abas Muhamed Kirevu uu ahaa hoggaamiye Islaami ah oo maxalli ah, Booliskana uu ku eedeeyay inuu mas’uul ka ahaa dib u soo kicinta unugyada argagixisada ee magaalada Kampala ayey Boolisku dileen.
Afhayeenka Booliska ayaa sheegay inay xireen 21 qof oo la tuhunsan yahay. Dadkan ayaa ahaa hawl-wadeenno, isku-duwayaal, maal-geliyeyaal hawlaha argagixisada.
Previous article‘Extremely Worrying’, Severe Drought Grips Most of Somalia
Next articleK/Galbeed oo shaacisay Liiska 11 Kursi oo La Dooranayo (Akhriso Xildhibaanada ku fadhiya xilligan)